फ्लोर क्रसको निरन्तरतामा चर्किएको रोनाधोना
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिफ्लोर क्रसको निरन्तरतामा चर्किएको रोनाधोना
कन्टिर–बाबू हिजोदेखि लगातार फ्लोर क्रसको कुरा सुनिरहेका छन् । पहिले त उनले यसको त्यति खासै भेउ पाएनन् तर जब यसका बारेमा उनले राम्ररी थाहा पाए तब चश्माभित्रको उनको एक जोडी आँखामा गजबको भाव देखियो ।
परिवर्तित भाव र परिस्थितिको सन्दर्भमा कन्टिर–बाबूले सुनेका छन्– मानिसका सबै अङ्गले झुठो अभिव्यक्त गर्न सक्ला तर आँखाले झुठो बोल्दैन रे ! अहिले कन्टिर–बाबूका आँखाका भाव पनि त्यस्तै छन् । खुच्चिङ खा भन्ने आशयको ।
सन्दर्भ कर्णाली प्रदेशको सरकारले प्राप्त गरेको विश्वासको मतको हो । माधव नेपाल पक्षीय एमालेका चार जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको जागीर जोगाइदिएछन् । यसपछि त विचरा ओल्बाको खेमामा रोइलो मच्चिएको छ । संसदीय व्यवस्था र मूल्य–मान्यताको दुहाइ दिन थालिएएको छ । ह्विप पालनको कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ ।
यी सबै प्रक्रियालाई बडो गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेका कन्टिर–बाबू एकाएक हाँस्न थाल्छन् र हिन्दीमा प्रचलित एक भनाइ भट्याउन थाल्छन्– कृष्ण करे तो रासलीला, मैं करुँ तो क्यारेक्टर ढिला ?
शाहीजी धन्यवादका पात्र छन् । संसदीय अभ्यासलाई उनले सहजतासाथ स्वीकारे । त्यसैले रोइलो, रोनाधोना बन्द गरौँ, संसदीय व्यवस्था सुदृढ गर्न सबै जुटौँ ।
ए, विश्वासको प्रस्तावलाई धोती लगाउन गण्डकी प्रदेशसभा मध्यरातमा स्थगन गर्न हुने ? प्रदेश १ मा प्रदेशसभा सदस्यबीच हडकम्प मच्चाउन हुने ? वाग्मती प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहन हुने ? सङ्घमा माओवादीका चार जनालाई मन्त्री बनाइरहन हुने ? अनि कर्णालीमा चार जनाले फ्लोर क्रस गर्ने किन नहुने ?
उत्तर छ कसैसँग ? ए बाबा यसमा रोइलो किन ? ठूलाले जे सिकाउने हुन्, सानाले त्यही सिक्ने त हुन् नि ! कुरो सिम्पल छ– जे रोप्ने हो, त्यही फल्ने हो । बबुरको बोट रोपेर आँपको अभिलाषा किन गर्नु ? रोप्ने बेलामा आफैँले संसदीय मूल्य–मान्यता बर्खिलापको बीऊ रोप्ने अनि अहिले त्यसैको दुहाइ दिन कसरी मिल्छ ?
बरु कन्टिर–बाबू शाहीजीलाई धन्यवाद दिन्छन्, संसदीय अभ्यासलाई उनले सहजतासाथ स्वीकार गरे । आफू अल्पमतमा रहेको जान्दा–जान्दै पनि उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रयास गरे । यस्तो पृष्ठभूमिमा कन्टिर–बाबू आग्रह गर्छन्– बेकारको यो रोइलो, रोनाधोना बन्द गरौँ, संसदीय व्यवस्था सुदृढ गर्न सबै जुटौँ ।
त्यसो त फ्लोर क्रस गर्ने चलनसँग कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिको पुरानै साइनो छ । २०५१ सालमा फ्लोर क्रस गरेर गिरिजा–बाबूको बहुमतको सरकारलाई अल्पमतको बनाइदिने मुख्यपात्र चक्रबहादुर शाही र दीपकजङ्ग शाह कर्णाली प्रदेशकै सांसद थिए ।
फ्लोर क्रसको राजनीति त्यति बेला ठिक ठान्नेहरूले अहिले चाहिँ गलत भन्ने नैतिक आधार के हो ? सर्प देखे पाखामा हात, माछा देखे दुलामा हात ?
फ्लोर क्रस मूल्य–मान्यता रोनाधोना